Daawo Sawirada:-Cadaado Oo Horumar Ganacsi Laga Dareemayo – Radio Muqdisho
Daawo Sawirada:-Cadaado Oo Horumar Ganacsi Laga Dareemayo
Magaalada Cadaado ee xarunta Ximan iyo Xeeb ayaa sanadihii ugu dambeeyay samaysay hormar dhinaca ganacsiga ah, iyadoo magaalgashadayaal deegaanka ah iyo qurbajoogta oo ka faa’iidaysanaya Nabadgalyada ay sameeyeen ganacsiyo waawayn oo xitaa dad camal la’aan ah ay shaqo ka heleen.
Faarax Maxamed Axmed waa hawlwadeen ka tirsan Hotelka Central oo ka mid ah Hoteelada dhawaan la hirgaliyay ayaa sheegaya in magaaladu ay samaysay hormar ganacsi 5-tii sano ee la soo dhaafay, oo ay ka hirgaleen Warshado yaryar, Hoteelo iyo nuucyo kale oo ganacsi, isagoo intaa ku daray in ay shaqaalaysiiyeen ku dhawaad 50-Ruux oo horay shaqo la’aan u ahaa.
Ganacsiga kobcaya ee magaalada iyo nabadgalyada ayaa sidoo kale dhiirigalisay Qurbajoobta, kuwaas oo qaar kood ay deegaanka ku soo laabteen.
Axmed Maxamed Diirshe waxaa Cadaado ugu dambaysay 28-sano ka hor ayaa Radio Muqdisho u sheegay in go’aansaday in deegaankiisa uu ku soo laabto mudadaas dheer ka dib, si uu nolol cusub uga samaysto.
Cadaado waxa ay xeebta badwaynta India u jiraa 270-Km sidaas oo ay tahay waxaa si caadi ah looga cunaa Kaluunka.
Maxamed Aadan Bood oo madax ka ah shirkadda Danwadaag oo Kaluunka ka ganacsatada ayaa sheegay in markii ay qiimeeyeen baahida loo qabo Kaluunka ay xarumo ka furteen magaalooyinka Cadaado, Godinlabe iyo Ceel-huur si kaluunka loo gaarsiiyo.
Adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo kuwo kaleba ayaa ah lacag la’aan ama ku dhaw, inkastoo wali hormarin loo sii baahanyahay.
Wasiirka Kalluumeysiga oo la kulmay dhigiisa Indosia”sawiro’
War Deg Deg Ah:-Qaraxyo Lala Eegtay Maqaayad Ku Taal Beydhabo